ညီနေမင်း: Kaspersky install လုပ်မရသည့် ပြဿနာအစ AVG က
မနေ့က ထိုင်းက သူငယ်ချင်း ထိုင်းနိုင်ငံသား တစ်ယောက်ကို AVG ကနေ kaspersky ကို ပြောင်းပါလားလို့ ပြောမိလိုက်တာနဲ့ပဲ သူ့ကွန်ပျူတာ လာထိုးအပ်ပါလေရော . တင်ပေးပါဦးတဲ့ . သူတင်တာမရလို့တဲ့ . ဇာတ်လမ်းက အဲ့မှာ စတော့တာပဲ ၄ ဆင့်ကို လုပ်လိုက်ရတယ် . ပြဿနာက kaspersky က လက်မခံတာက စတာပဲ . ကဲ AVG ကနေ kaspersky ပြောင်းပြီး တင်ချင်သူများ အခက်အခဲရှိရင် ဖြေရှင်းနိုင်အောင်လို့ ပို့စ်တင်ပေးလိုက်တာပါ . kasprsky ကို add and remove program ကနေလဲ ဖြုတ်လို့မရပါဘူး . ဘယ်လိုဖြုတ်ဖြုတ် မပြုတ်တဲ့အပြင် ပြုတ်သွားပြန်တော့လဲ kasprsky ပြောင်းလို့မရဘူး . ကဲ အောက်က အဆင့်လေး တွေအတိုင်း လုပ်ကြည့်ကြပါ .
AVG antivirus program ကို uninstaller program နဲ့ ဖြုတ်လိုက်ပါ . မရှိသေးရင် ဒီမှာ တင်ထားပေးပြီးသားပါ . add and remove program ကနေ uninstall လုပ်ပြီး ဖြုတ်လို့မရတဲ့ software မှန်သမျှကို Uninstaller နဲ့ပဲ ဖြုတ်လို့အဆင်ပြေပါတယ် . ကဲ ဖြုတ်ပြီးပြီးချင်း တင်လိုက်တော့ သူကလက်မခံဘူး AVG တင်ထားတယ် ပြောနေတယ် . အဲ့ဒါနဲ့ အောက်က အဆင့်တွေအတိုင်း လုပ်လိုက်တာ အဆင်ပြေသွားတယ် .
(၁) Start >> Run ကိုသွားပါ
(၂) Run box ထဲမှာ regedit ရိုက်ထည့်ပြီး OK ပေးလိုက်ပါ
HKEY_LOCAL_MACHINE >> SOFTWARE >> ကိုရွေးပြီး ဘေးကမြှားကို ဆက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ မိမိကွန်ပျူတာမှာ တင်ထားသမျှ program တွေ အကုန်လုံးကို တွေ့ရမှာပါ . အဲဒီ့အထဲက ဖျက်တုန်းက မပျက်ခဲ့တဲ့ AVG ဖိုင်ကို လိုက်ရှာပြီး Right click ထောက်ပြီး Delete ပေးလိုက်ပါ .
HKEY_LOCAL_MACHINE >> SOFTWARE >> Microsoft >> Windows >> CurrentVersion >> Uninstall >> AVG8uninstall ဆိုတဲ့ဖိုင်ကို ပုံ-၃ ထဲကအတိုင်း rightclick ထောက်ပြီး Delete ပေးလိုက်ပါ . အဲ့လောက်ဆိုရင်တော့ ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင် kaspersky တင်လို့ရပါပြီ .
အဲ့ဒါနဲ့ရပြီထင်ပြီး ပြန်တင်လိုက်တယ် . မရသေးပါဘူးတဲ့ ကျန်သေးတယ် ပြောတာနဲ့ နောက်ဆုံး အဆင့်အနေနဲ့ AVG Remover ကို run လိုက်တော့မှ AVG Remover tool က အကုန်လုံးဖြုတ်ပေးသွားတယ် . ပြီးတော့မှ kaspersky 2010 က တက်လာတယ် . တစ်ခါတစ်လေ နံပါတ်(၁) နဲ့တင် အဆင်ပြေသလို တစ်ခါတစ်လေ အဆင့်(၂)အထိလုပ်တာနဲ့ အဆင်ပြေသွားပါတယ် . လုံးဝမရခဲ့ရင် ခက်ခဲနေမှာစိုးလို့ ကျွန်တော် AVG မလိုချင်လို့ ဖြုတ်တဲ့ အခါမှာ တွေ့ကြုံရတဲ့ အခက်အခဲလေးကို ပို့စ်အဖြစ်တင်ပေး လိုက်တာပါ . အဆင်ပြေကြ လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ . AVG REMOVER TOOL ကို အောက်မှာ Download လုပ်ယူလိုက်ပါ .
Posted by ညီနေမင်း at 7:14 AM